दशैंको टिका आज, कति बजे छ साइत ? – Ratopati News
Ratopati News १० कार्तिक २०७७, सोमबार ०४:१७
दशैँको मुख्य दिन अर्थात आज टिका । मान्यजनको हातबाट टिका र जमरा ग्रहण गर्ने दिन ।
यस दिन बिहान नौ रात १० दिन पूजा गरिएको स्थलमा देवी विसर्जनका लागि बिहान १०: ११ बजेको साइत शुभ रहेको नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिका अध्यक्ष प्राडा रामचन्द्र गौतमले बताए । विजयादशमीमा साइत नै खोजेर टीका लगाउनेका लागि भने बिहान १०:१९ बजेको साइत उत्तम छ ।
१ बैशाख २०७७, सोमबार ०४:५४
कुन देशहरुलाई कोरोना भाइरसले छोएको छैन ? (सुची सहित)
४ बैशाख २०७७, बिहीबार ०४:१७
निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कोषको रकम कोरोना उपचार कोषमा लैजान सचिवालयको सुझाव
११ बैशाख २०७७, बिहीबार ०८:५६
‘जनता समाजवादी पार्टी’ निर्वाचन आयोगमा दर्ता
८ जेष्ठ २०७७, बिहीबार ०६:११
आज आर्थिक वर्ष २०७७-०७८ को बजेट प्रस्तुत हुँदै